Wasiir Beyle oo ka jawaabay eedeynta kulul ee uga timid Hirshabelle | Dhacdo
Wasiir Beyle oo ka jawaabay eedeynta kulul ee uga timid Hirshabelle
Wasiirka Maaliyadda Somaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka jawaabay eedeyntii Maamulka Hirshabelle, ee ahayd in Wasaaradda Maaliyadda xayirtay lacago loogu talagalay in wax looga qabto fatahaadda Webiga Shabelle, waana xilli uu Webiga ku tahay qaybo ka mida deegaanada Hirshabelle.
Warsaxaafadeed uu Wasiirku soo saaray ayaa u qornaa:-
Wasaaradda Maaliyadda ee DFS, markay aragtay war saxaafadeedka ka soo baxay Guddiga Maamulka Hirshabelle ee maaraynta masiibooyinka, waxay caddaynasaa sida ay u socdaan hawlaha ka hortagga fatahaadaha ee Mashruuca ka soo kabashada Masiibooyinka (SCRP) ka waddo Dowlad Goboleedka Hirshabelle.
Mashruuca waxa uu bilaabay qiimeynta baahida ka hortagga fatahaadaha Webiyada Shabelle iyo Jubba 27 Marso 2021. Qorshaynta hawlaha waxaa si wadajir ah u fuliyay Mashruuca Ka soo kabashada Masiibooyinka (SCRP) iyo dawlad Goboleedka aan kor ku xusnay.
Waxaa la sahmiyay 71 goobood oo laga fulinayo ka hortagga fatahaadaha.
Waxaa la diyaariyay naqshadaynta loo raacaayo biyo xirista 5 April 2021.
Waxaa la furay u tartanka fulinta hawlaha ka hortagga fatahaadda.
Waxaa soo tartamay 44 qandarasleyaal oo maamulka Hirshabelle soo xulay (Jowhar 19 iyo Beletwayne – 25)
Laba shirkadood ayaa hadda hawlo biyo xirid ah ka wada 7 goobood (sites) gobolka Hiiraan.
Waxaa diyaar ah 10 qandaraaslayaal (contractors ) oo hawlgeli doona usbuuca soo socda: 6 shirkadood oo ka howlgali doonna Beletwayne iyo 4 ka howlgali doonna Jowhar iyo nawaaxigeeda. Wasaaradda Maaliyadda ee DFS waxay dhibaatada fatahaadaha la qaybsanaysaa Dowlad Goboleedka iyo shacbiga reer Hirshabelle.
Waxaa dadaal aan ugu jinaa dardargelinta hawlaha Mashruuca Ka soo kabashada Masiibooyinka (SCRP) uga qorshaysan degmooyinka Hirshabelle.
Waxaan cadeynaynaa in Wasaarada Maaliyadda DFS aanay jirin wax dhaqaale ah oo ay ka xayirtay Dowlad Goboleedka Hirshabelle, ayna sida ku cad qorshaha Mashruuca Ka soo kabashada Masiibooyinka (SCRP) ay howluhu u socdaan sidii loogu talagalay.
Wasaaradda Maaliyadda DFS waxay Guddiga Ka hortagga Fatahaadda ee Hirshabelle ka codsanaysa inay caddaymo ka bixiso lacagaha ay ku eedeyeen in dawladda dhexe ka xayitray wax ka qabashada fatahaadda degaanada Hirshabelle.